अहिले जसरी सरकारले दुईटा अध्यादेश ल्यायो र खारेज पनि गर्यो । यसबारे विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिला पृष्ठभूमिलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले नेकपाको राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु ।
आज विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जस्तो डरलाग्दो महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको अनुभूति हुन नसक्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । यसरी हेर्दा, मधेशमा बसोवास गर्दै आइरहेका मधेशी जनताको तथ्याड्ढ, अवस्था, बलिदानी तथा संघर्ष नेपाल सरकारको मानसपटलमा ताजै हुनुपर्दछ । फेरि पनि यस्तो महामारीको बेला जनता “रोगलेभन्दा भोकले मर्नु” किन ? कारण के ?
एक्कासौ शताब्दिमा सुचना प्रबिधिले ठुलै फड्को मारेको छ । कालो डसको कमाण्ड लाइनदेखि लिनक्सका अफ्ठेरो कोड अनि ६४ एमबिको र्याम अनि बिल गेट्सले नै १९८० ताका ६४० केबि र्याम नै पर्याप्त हुन्छ भनेका पनि थिए। कुनै बेला र्याम एउटा निश्चित एकाइमा पुगेपछि थप्नु पर्दैन भन्ने कुरा जुन आज आएर ८ जीबीसम्म बजारमा पाउन थाल्यो ।
"घर पुग्न पाकै छैन, सरकार भन्छ STAY HOME STAY SAFELY "
नेपाल सरकारले चैत्र १२ गते देखि बैशाख ३ गते सम्म lockdown गर्ने निर्णय गरेको छ। चैत्र ८ गते शुक्रवार सम्म नेपालको अवस्था सामान्य थियो। १० गते बाट सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गर्ने निर्णय चैत्रको ८ गते गर्यो। तर प्राभेट सवारी साधन बन्द गरिने निर्णय गरेको थिएन ।
लकडाउनमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका (विचार)
विश्व नै अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रासमा रहेको छ । प्रत्येक देश कोरोना संक्रमणबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन केन्द्रित हुनु परेको छ । सबै देशहरु आफ्ना अवस्था र स्थितिअनुसारको निर्णय लिने बाध्यतामा छन् । कोरोना विरुद्धको संघर्ष नै अहिलेको प्रमुख संघर्षको रुपमा रहेको छ ।
चीनसँगको व्यापारले जोखिम थप्यो
हाल सालै चिनबाट कीट ल्याउन ह्वाइट बडि ( White Body ) आउदो शनिबार बैजिङ्ग जाने भएको छ तथा योसंगै चिनसंग जोडिएको उतरी नाका खोल्ने निर्णयले नेपाल र नेपालीलाई थप संकट्मा पारिने देखिएको छ।
उटा महिला शिक्षित भयो भने सिङ्गो परिवार, समाज हुँदै राष्ट्रलाई परिवर्तनको मार्गमा लम्काउन सकिन्छ । विश्वको विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि मध्यनजर गर्ने हो भने पुुरूषको तुुलनामा महिलाहरू पनि शिक्षामा अगाडि रहेको देखिन्छन् ।
व्यापार, मनोरञ्जन वा रमाइलोका लागि गरिने यात्रालाई पर्यटन भनिन्छ । विश्व पर्यटन सङ्गठनको परिभाषा अनुसार पर्यटकले “आफ्नो सामान्य परिवृत्ति बाहिर, चौबीस (२४) घण्टा भन्दा बढी तर एक क्रमागत वर्षभन्दा कम समय, मनोरञ्जन, व्यापार र त्यस ठाउँमा आयश्रोत हुने क्रियाकलाप बाहेक अरू उद्देश्यका लागि यात्रा गरि बस्ने“ मान्छेलाई जनाउँछ ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरी तीनवर्षे कार्यकाल १५ पुसमा पूरा गरेका छन् । आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्र्नुअघि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विदेश मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीसँग बिदाइ भेट गरे ।
कालापानीमा नेपाल र भारतको स्थान
नेपालको सीमानामाथि सोसल मिडियाको जमानामा वैज्ञानिक तथा चौतर्फी अध्ययनको शुरूवात भने भएको पाइन्छ । यस प्रकार यदि विभिन्न स्रोतहरूलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका सीमा मिच्ने कार्य भारत तथा चीन दुईटैबाट भएको पाईन्छ ।
पर्यटन वर्ष–२०२० : पर्यटकको बसाइ अवधि कसरी लम्ब्याउने ? (टिप्पणी)
नेपाल भ्रमण वर्ष अर्थात Visit Nepal 2020 घोषणा गरिएको छ । त्यसको प्रचार/प्रसार पनि जारी छ । तर भ्रमण वर्षको तयारीको क्रममा पहिलाको भ्रमण वर्ष झैं यस पटक पनि त्यसको प्रभाव र गतिविधिबाट तराई/मधेश बेखबर छ ।
एकातिर संविधान जारी भइरहँदा अर्कोतिर टाउको र छातीमा गोली हानिँदै थियो । एकातिर दिपावली मनाइँदै थियो, अर्कोतिर लाश जल्दै थियो । एकातिर खुशियाली मनाइँदै थियो, अर्कोतिर शोक ।
सेनापतिले हरेक रणनीति सिपाहीलाई बताउन आवश्यक छैन : डा.सीके राउत
जब सेना कुनै युद्ध लड्न निस्किन्छन् भने जरुरी छैन कि सेनापतिले हरेक रणनीति आफ्ना सिपाहीहरुलाई बताओस् । युद्धमा उसैले विजय हासिल गरेका छन् जसमा सिपाहीहरुले आफ्ना सेनापतिमाथि आस्था र विश्वास बनाएर राख्छन् । हाम्रो विजय सुनिश्चित छ, यो हाम्रो जीवनको युद्ध हो ।
पहाडी र मधेशी एक हो र दुई समुदाय नमिलेसम्म न संस्कृतिको कल्पना गर्न सकिन्छ न त विकास र समृद्धिकै सपना साकार हुन सक्छ भन्ने यो नाटकको आशय हो ।